Dj Lewis dia nanao fanambarana lehibe momba ny fifandraisan'i Carmen Sama sy i Dj Arafat tara - teles relay
Dj Lewis dia nanao fanambarana lehibe momba an'i Carmen Sama ary ny fifandraisan'i Dj Arafat ihany
Ny fanambarana dia mbola mijanona eo amin'ny fiainan'ny tantaran'ny mozika Ivoariana Houon Ange Didier izay maty volana vitsivitsy lasa izay rehefa avy nandona fiara nandritry ny hazakazaka môtô. Eny tokoa, niteraka fahafatesan-kevitra sy fanambarana maro ny fahafatesany.
Cameroun: Depuis les incidents à l’hôtel Intercontinental en Suisse…
Fanambarana maro momba ny fiainan'ny tantaran'ny fanonganam-panjakana tsy nahy dia tsy mitsahatra tsy mahita ny hazavan'ny andro. Mpisera Internet maro sy ireo akaiky ny fianakaviany no tsy mitsahatra mitory, indrindra ilay mpihira Dj Lewis izay tsy nandany fotoana hanaovana fanambarana lehibe momba ny mpivady Carmen Sama sy ny farany alohan'ny Dj Arafat.
Eny tokoa, mpamoron ny hira "Fluzy Avian" nanamafy fa io tokoa no nanosika an'i Houon Ange Didier teo an-tsandrin'i Carmen handeha fa nanambara izany fa fisaorana ilay nahateraka, Ny fitiavana Dj Arafat sy i Carmen Sama. "Efa nolazaiko taminao fa nanambady aho ary nampahafantatra anao an-dRamatoa ianao nilaza anh foutaise." Hanambady ihany koa i Carmen Sama vokatra » hoy i Dj Lewis nandritra ny famoahana ny tamba-jotra sosialy.
Zava-dehibe ny manasongadina fa ny lohan'i Sina dia hita ho toy ny sarin'ny mozikan'i Ivoariana ary nahazo mari-boninahitra lehibe kokoa avy amin'ny Shinoa sy ny governemanta Ivoariana nandritra ny fandevenana azy.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/cote-divoire-dj-lewis-fait-denormes-revelations-sur-la-relation-de-carmen-sama-et-feu-dj-arafat/
Ny valiny vaovao avy any Fame Ndongo mankany Maurice Kamto: "Lainga manaraka ny Filoha-olom-boafidy ... an'ny MRC dia ao anatin'ny fanamboarana"
Alimanaka FIFA: Loza manoloana ny CAN 2021?